Nutrition – Page 21 – Healthy Life Journal
၊ မီမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ကျောင်းမှာ သင်ခန်းစာတွေကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိဖို့၊ အလုပ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့ နေ့စဉ်စားတဲ့ အစားအသောက်က အရေးကြီးပါတယ်။ (၁) ဆယ်လ်မွန်ငါး ဦးနှောက်အားကောင်းစေတဲ့ အစာတစ်မျိုးပါ။ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်ပါဝင်မှုများတဲ့ ဆယ်လ်...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်တွင် စားသင့်သည့် အကောင်းဆုံးအစာများ
လရိပ်မေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ခရီးနှင်ထားတဲ့ ကားနဲ့ တူပါတယ်၊ လောင်စာလိုနေပါပြီ။ အဲဒီအချိန် မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်နိုင်ဖို့ အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ရေ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်မဖြည့်တာက အကြီးမားဆုံးအမှားပါ။ လေ့ ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန် မှာ...
တာရှည်ခံပဲကြော်၊ စည်သွပ်ဘူးထဲကအစာ စားသင့်၊ မသင့်
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး မေး. ပဲကြော်ဘူး၊ စည်သွပ်ဘူးထဲက အစာတွေကို စားသင့်ပါသလား။ ဖြေ. ပဲကြော်ဘူး၊ စည်သွပ်ဘူးထဲကအစာတွေက ပုံမှန်အတိုင်းကြော်ထားရင် ဒီလောက်ကြာရှည် မခံနိုင်ပါဘူး။ ဘူးတွေထဲမှာ အကြော်တွေကြာရှည်ခံအောင် ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ လုပ်ထားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းတော့ မစားပါနဲ့။ လုံးဝမစားနဲ့လို့တော့...
အစာကြေးများတဲ့ ကလေးတွေကို အာဟာရဓာတ် ပြည့်ဝအောင် ဘယ်လို ကျွေးသင့်သလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး အစားကြေးများတဲ့ ကလေးတွေကို New Food New Item များများ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေက ကြေးများတဲ့အတွက် ဒီနေ့မှာ ကြက်သားပြုတ်ကြော် လုပ်ကျွေးလိုက်ရင် စားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ အဲဒီလို ကြက်သားပြုတ်ကြော် ကျွေးလိုက်ရင် မစားတော့ပါဘူး။...
ပန်းသီးစားရင် အခွံနဲ့ စားသင့်သလား
မေး ပန်းသီးစားရင် အခွံနဲ့ စားတာနဲ့ အခွံနွှာစားတာ ဘယ်အရာက ပိုကောင်းပါသလဲ။ ပန်းသီးအခွံတချို့က ဖယောင်းပါတယ်လို့ ပြောကြလို့ပါရှင့်။ ဝင်းဝင်းမေ၊ ပဲခူး။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ.ပန်းသီးစားရင် အခွံနဲ့စားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ပန်းသီးနဲ့အခွံကြားမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ အများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်...
လေဖြတ်ဝေဒနာ မရစေဖို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လေဖြတ်ဝေဒနာဖြစ်စေတဲ့ တချို့အချက် ( ဥပမာ- အသက်အရွယ်၊ လိင်အမျိုးအစား၊ လေဖြတ်ရောဂါရာဇဝင် )တွေကို ရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်ပေမယ့် လေဖြတ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေတဲ့ အချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ – လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းကို...
၊ မိမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တချို့အစားအသောက်တွေ စားသောက်ပြီးချိန်မှာ ထူးထူးခြားခြား ဆီးရွှင်နေပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းရင်းကို သိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကော်ဖီ ဘာကြောင့်လဲ – ကဖင်းဓာတ် ပါဝင်လို့ပါ ကော်ဖီမှာ ကဖင်းဓာတ်ဟာ ဆီးမသွားအောင်ဟန့်တားတဲ့ ဟော်မုန်းADHထွက်ရှိမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်...
ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ် လျော့ကျစေသည့် အစာများ
မီမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ရောဂါပါ။ တာရှည်ခံအောင် ပြုပြင်ထားတဲ့ အစာတွေ စားတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်တာတွေက ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ များစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ စားသောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန် လုပ်ဆောင်တာကြောင့် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်း...
မယ်လတိုနင်ဟော်မုန်း အထွက်တိုးစေမည့် အာဟာရ
၊ လရိပ်မေ ၊ မယ်လတိုနင်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရှိ ပိုင်နီရယ်ဂလင်းက ထုတ်လိုက်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းက ရောင်ရမ်းမှု လျော့ကျ စေတဲ့အစွမ်းနဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် အစွမ်းတို့ရှိတဲ့အပြင် နှလုံးထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင်ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ မယ်လတိုနင်ရဲ့ ရေပန်းအစားဆုံးကဏ္ဍက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝနရီကို...
၊ မိမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ဝမ်းမှန်မှန်သွားမှသာ တစ်နေ့လုံး နေထိုင်ကောင်းပြီး သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေမှာပါ။ ဒါမှသာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီ ဘာကြောင့်လဲ – ကဖင်းဓာတ် ပါဝင်လို့ပါ။ ကော်ဖီမှာ ကဖင်းဓာတ်ပါဝင်မှု များတာကြောင့်...